Iskuullada Gaarisa oo Xirmay Cabsi Alshabaab laga qabo darteed & macallimiintii oo iskaga tegey. | Somalisan.com
Home Afsomali Iskuullada Gaarisa oo Xirmay Cabsi Alshabaab laga qabo darteed & macallimiintii oo...
Dhowr iskuul oo ku yaal Gobolka Gaarisa ayaa shalay loo xiray macallimiin la’aan awgeed kadib wareejin ballaaran oo laga sameeyay amni-darrada. Isaga oo la hadlayey suxufiyiinta dugsiga hoose ee Gaarisa ka dib shir xiisadeed, xubnaha guddiga ee ka socda xarumaha kala duwan ee gobolka ayaa sheegay in dadka degani ay xaq u leeyihiin waxbarasho wanaagsan sida kuwa kale ee dalka ka jira.
Waxay yiraahdeen dowladda waa inay ku dhaqaaqdaa tallaabo adag oo argaggixiso ah. Xasan Sheekh Cali oo ku hadlayey magaca guddiyada ayaa yidhi “Waxaan go’aansanay inaan xidhno iskuulada waxaanan waydiisanay waalidiinta inay ka saaraan carruurtooda illaa ay dawladdu wax ka qabanayso guryahooda.” Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku soo aadayaa maalin uun kadib markii Guddiga Adeegga Macallimiinta (TSC) uu ogolaaday in lagu wareejiyo macallimiin ka cararay iskuuladooda ka dib weeraradii ka dhacay Dugsiga Hoose ee Kamuthey halkaasoo saddex ka mid ah asxaabtooda ay dileen dagaalyahannada Al Shabaab.
Dadka aan deegaanka ahayn
Xagjiriinta ayaa bartilmaameedsanayay dadka aan deegaanka ahayn ee ka shaqeeya gobolka waxayna sidoo kale dileen afar caruur ah oo ka soo jeeda aasaasiga Saretho. Shalay, inta badan iskuulada, qaar waxay ku yaalliin magaalada Gaarisa, waxay lahaayeen macallimiin yar. Tusaale ahaan, Dugsiga Sare ee Gaarisa, in ka badan 30 macallin ayaa tagay. Xoghayaha Ururka Qaranka ee Macallimiinta Kenya (Knut) Mr Abdirizack Hussein ayaa sheegay in saddex meelood meel macallimiinta ay uga baxeen gobolka.
Wuxuu ku eedeeyay TSC inay siiso wareejinta si aan shuruud lahayn isagoo codsaday in go’aanka si deg deg ah looga noqdo. “Caruurta jilicsan waxaa khiyaami kara kooxaha xagjirka ah. Waxaan codsaneynaa in meesha laga saaro wareejinta macallimiinta, ayuu yiri. Iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa cadeeyay in go’aanka ay gaareen gudiga maareynta iskuulada dowliga ah ee ah in la xiro iskuulkooda aysan saameyn doonin.
Previous articleMadaxweynaha soomaaliyeed ee Somaliland Oo Booqday Xarun Lagu Dabiibo Carruurta Wadnuhu Daloolo Oo Uu Qaranku Bixiyey Kharashka Ku Baxaya
Next articleFull VIDEO Muuse Biixi Ispitalkaan Caruurta Somali oo dhan in lagu daweeyo Xaq bey u leeyihiin
Somalisan News - January 20, 2017
Somalisan News - February 22, 2020
Somali government plans to ban Khat from Kenya